Afar nin oo lagu xiray Cameroon iyaga oo haysata laba tan oo miisaanka loo yaqaan 'pangolin' iyo 200 faahfaahinta faan-maroodiga - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Afar nin ayaa lagu qabtay Cameroon iyaga oo haysata laba tan oo miisaaniyaal ah oo miisaaniyiin ah iyo talooyin fool-maroodi ah oo 200 ah
Afar nin ayaa lagu qabtay Cameroon iyaga oo haysata laba tan oo miisaaniyaal ah oo miisaaniyiin ah iyo talooyin fool-maroodi ah oo 200 ah
WAXAA LAGA HELAY 17 March 2019
BAABUURTA Suuxdinta caadiga ah kama badna boqolaal rodol
Afar qof oo tahriibayaal ah oo noocyada xayawaanka lagu ilaaliyo ah ayaa la xiray Khamiistii Douala (Cameroon). Waxay lahaan jireen laba tan oo miisaanka loo yaqaan 'pangolin', khudbadii yarayd ee khatarta ah oo halis u ah joojinta iyo fool-maroodiyaha 200.
Kantaroolayaasha ayaa isku diyaarinayay in ay iibiyaan dhammaan walxahan. "Waa suuxdin aad u weyn, badanaaba waxaan qabnaa daraasiin, mararka qaarkood boqolaal miisaan oo qadhaadh ah"ayaa la yaabay agaasime kuxigeenka NGO LAGA oo hogaaminayey howlgalka hay'adaha. "Halkan waxaan ka hadleynaa in ka badan laba tan oo tin ah! "
miisaanka loo yaqaan 'pangolin'
Dalab xoogan oo Aasiya iyo Afrika ah
Qabsashada Tani waxay ku qiyaastay 150 million francs francs (ku saabsan 227.000 euros). Miisaanka Pangolin waxaa la raadiyaa ka dib markii laga soo bilaabo Koonfur Aasiya oo loogu talagalay guryaha loo yaqaano dawooyinka looga hortago finanku, kansarka iyo qalalaaso. Ganacsiga xayawaankan waa la mamnuucayaa tan iyo 2016, laakiin xayawaanka iyo qolfahaaga ayaa weli ku iibinaya dahab Hong Kong. Hal malyan oo pangolins ah ayaa lagu qafaashay Afrika iyo Asia tobankii sano ee la soo dhaafay.
Ganacsiga sharci-darrada ah ee fool-maroodiga ayaa ah kan saddexaad qaabka gaadiidka inta ugu badan ee faa'iido daroogada ah iyo hubka. Waxaa lagu sii kordhiyay baahida xooggan ee Aasiya iyo Bariga Dhexe, halkaas oo difaaca loo isticmaalo daawada dhaqanka iyo qurxinta. -maroodi waxaa lagu iibin karaa ilaa € 7.000 euros halkii kiilo.
laba ton oo miisaan
Kiniiniyada "Smart" ayaa jira oo waxaan u baahanahay inaan ka fikirno halista